Mpanamboatra sy mpamatsy asidra DL-Malic China Bohua
CAS tsia: 97-67-6
Anarana hafa: Malic
Tsia EINECS: 202-601-5
Tsy misyAOTA: Malic
Karazana: Mpanara-dalàna momba ny asidra
Model Model: 20200508
Anaran'ny vokatra: Malic
Endrika: Endrika vovoka
Fitehirizana: Cool Storage maina
Taratasy fanamarinana: ISO9001 / Halal / Kosher / GMP
Ny asidra malika dia fitambarana biolojika miaraka amina molekiola C4H6O5. Izy io dia mandray anjara amin'ny tsiro marikivy mahafinaritra amin'ny voankazo, ary ampiasaina amin'ny famenon-tsakafo. Ny asidra malika dia manana endrika stereoisomerika roa (L- sy D-enantiomers), na dia ny L-isomer ihany no misy voajanahary.
Malic Acid dia manana hygroscopic mahery, mety levona anaty rano sy etanol. Misy asidra mahafinaritra manokana.
1.Ny tsiro asidra Malika dia manakaiky ny paoma voajanahary marikivy, raha ampitahaina amin'ny asidra citrika, miaraka amin'ny asidra, tsiro ary malefaka, fotoana ipetrahana maharitra, sns., Dia be mpampiasa amin'ny zava-pisotro avo lenta, sakafo ary indostria hafa.
2.Malic Acid, citric acid cycle intermédia organisations, dia afaka mandray anjara amin'ny fizotran'ny fambolena zavamiaina bitika dia azo ampiasaina ho loharanon-karbaona ho an'ny fitomboan'ny mikraoba, ary noho izany dia azo ampiasaina amin'ny mpandraharaha fermentation sakafo. Ny masirasira dia azo atao, ohatra, ny mpandraharaha mampiroborobo ny fitomboana dia azo ampiana amin'ny ronono masirasira ihany koa.
3.Malic Acid dia afaka mamokatra pectin gel effet, azo ampiasaina hanamboarana mofomamy voankazo, jam ary gel jeles, sns.
Bika Aman 'endrika Vovoka na granula fotsy na fotsy saika fotsy manana tsiro asidra mahery
Assay (toy ny C4H6O5) 99.0% ~ 100.5%
Anarana simika DL-hydroxy butanedioic acid
arsenika 2mg / kg Max
Asidra Fumaric 1.0% Max
Asidra maleika 0,05% Max
Raharaha tsy mety ritra 0,1% Max
FOMBA ANJARA SY TANJONA Ny asidra DL-Malic dia azo ampiasaina ho asidra amina zava-pisotro mangatsiatsiaka (ao anatin'izany ny zava-pisotro lactobacillus, zava-pisotro misy ronono, zava-pisotro misy gazy, cola), sakafo mangatsiaka (ao anatin'izany ny sherbet sy ny gilasy), ny sakafo voahodina (ao anatin'izany ny divay sy mayonnaise). Izy io dia ampiasaina ho mpitazona loko sy antiseptika amin'ny ranom-boankazo. Izy io koa dia ampiasaina ho toy ny emulsion stabilizer ny atody atody. Ny asidra DL-Malic koa dia azo ampiasaina ho mpanelanelana amin'ny fanafody, kosmetika, fanasan-damba, mpanadio vy, mpiasan'ny buffering, retarder ao amin'ny indostrian'ny lamba, solontenan'ny polyester fibre whiteningcent.
firaka 2mg / kg Max
Fitehirizana Mitazàny amin'ny rivotra amin'ny toerana maivana sy maina sy mangatsiaka.
Fonosana 25KG harato ao amin'ny Kraft / Bag Plastika nilahatra tamina kitapo PE, 17MT / 20FCL (amin'ny paleta) na 19MT / 20FCL (tsy misy paleta).
Teo aloha: Monidride asidra Citric / Asidra Citric Anhydrous
Manaraka: Asidra Fumaric
L asidra Malic